N Acetyl L Cysteine | Mega Planet Co., Ltd
Caution : Those who supplement with NAC should drink6to 8 glasses of water daily in order to prevent cysteine renal stones. Cysteine renal stones are rare but do occur.
အမျိုးအစားအမှတ်စဉ် - 01534
N-Acetyl–L-Cysteine သည် အဆုပ်လေပြွန်နှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေးအတွက် မြင့်မားသည့် ဇီဝလုပ်ငန်းအာဟာရတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ယင်းသည် cellular Level အတွင်းရှိ ကျန်းမာသည့် glutathione levels များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ glutathione သည် neurons များကို oxidative stress ထံမှ ကာကွယ်ပေးပြီး foreign compounds များ၏ တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ N-Acetyl–L-Cysteine သည် အသည်းနှင့် ခုခံအားအတွက် စွမ်းအားပြည့်ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျန်းမာသည့် glutathione levels များ ကို မြင့်တင်ပေးသည်။
စွမ်းအားပြည့် antioxidant များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျန်းမာသည့် ခုခံအားစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အသဲကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အစုပ်လေပြွန်နှင့် အသက်ရှုစနစ် ကျန်းမာရေးကို မြင့်တင်ပေးသည်။
Cellular Level အတွင်း Glutathione – Oxidant ကာကွယ်မှု
N- Acetyl – L - Cysteine သည် စုပ်ယူအားကောင်းမွန်ပြီး ခန္ဒာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးပြုသည်။ N- Acetyl – L - Cysteine သည် glutathione ကို ထိန်းညှိပေးသည်။ glutathione သည် စွမ်းအားမြင့် antioxidant ဖြစ်ပြီး free radical damageများမှ cells များကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် cellular Level အတွင်းရှိ foreign compounds များ၏ တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး neurons များကို oxidative stress ထံမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
အသဲပံ့ပိုးမှု၊ ခုခံအားကျန်းမာရေးနှင့် အခြား
N- Acetyl – L - Cysteine သည် ယင်း၏ လျင်မြန်သည့် စုပ်ယူနှုန်း ပါဝင်သည့် စွမ်းအားမြင့် အာဟာရတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကျန်းမာသည့် အသက်ရှုစနစ်နှင့် အစုပ်လေပြွန်စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ N- Acetyl – L – Cysteine သည် ကျန်းမာသည့် အသည်းစနစ်ကို မြင့်တင်ပေးပြီး ခုခံအား ကျန်းမာရေးကိုလည်း မြင့်တင်ပေးသည်။ cellular glutathione အပေါ်လေ့လာချက်ပေါင်း (30)အရ N- Acetyl – L – Cysteine သည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု နေထိုင်ကောင်းမှုနှင့် ဘဝအရေအသွေးမြင့်မားမှုကို ဦးစားပေးပံ့ပိုးပေးသည်။
N- Acetyl – L – Cysteine ဆေးတောင့်၏ Formula အတွင်း စွမ်းအားမြင့်အာဟာရ 600 mg ပါဝင်ပြီး ယင်းသည် သင်၏ ခုခံအားစနစ်နှင့် အသည်းကျန်းမာရေးကို ပံ့ပိုးပေးပြီး cellular Level အတွင်းရှိ free radical damage များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ယနေ့မှစ၍ သင့်နေ့စဉ် အာဟာရဖြည့်စွက်မှုအတွင်း N- Acetyl – L – Cysteineကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
အခြားပါဝင်မှုများ - vegetable cellulose (capsule), vegetable stearate, silica.
သတိပြုရန် : နေ့စဉ်NAC ပါဝင်သည့် အာဟာရ 6-8 ခွက်ခန့် မှီဝဲသူများသည် စအိုကျောက်တည်မှုကို ကာကွယ်ရမည်။ စအိုကျောက်တည်မှုသည် ရှားပါးသော်လည်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။
Healthy Origins မှ ယခုအခါ သက်သက်လွတ် Vitamin D3 Formula ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်။
Healthy Origins မှ သက်သက်လွတ် Vitamin D3 5,000 IU အား USA တွင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ပြင်သစ်မှ ထုတ်လုပ်သည့် Vitamin D3 ကုန်ကြမ်းကို ထည့်သွင်းထားသည်။
အအေးခံ ဖိသွင်းထားသည့် သံလွင်ဆီ Formula ဖြင့် ကောင်းမွန်သည့် စုပ်ယူအားကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
Healthy Origins Vitamin D3 မှ အောက်ပါတု့ိ ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျန်းမာသည့် အရိုးနှင့်သွားများကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု
ကျန်းမာသည့် နှလုံးသွေးကြောစနစ်နှင့် Calcium စုပ်ယူအားအတွက် အရေးကြီးသည့်အချက်များ ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဆေး ၁ ဗူးပါ ဆေးထောင့် - 360
မှီဝဲရမည့်ပမာဏ % DV
Vitamin D3 (From Lanolin) 5,000 IU 1,250% (as Cholecaliciferol)
အခြားပါဝင်မှုများ - Vegetarian Softgel (Non – GMO Corn Starch, Carrageenan, Glycerin, Sorbitol, Purified Water), Organic Extra Virgin Olive Oil.
Toll-Free 888-228-6650 Fax : 412-220-8760
P.O.Box 12615 Pittsburgh, PA 15241-0615
Premium Vitamins by DSM – www.qualityforlife.com.
Quali@ isatrademark of DSM.